Diyaaradda Cusub ee Rolls-Royce All-Electric ayaa si toos ah u Baxday
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaaradda Cusub ee Rolls-Royce All-Electric ayaa si toos ah u Baxday
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Wararka UK
Diyaaradaha Rolls-Royce ee korontada ku shaqeeya oo dhan
Goobta: Wasaaradda Difaaca UK ee Boscombe Down. Muddada duulimaadka: 15 daqiiqo. Diyaaradda: Rolls-Royce all-electric Spirit of Innovation. Natiijada: waa guul kale oo loogu talagalay socdaalka hawada ee qariban.
Rolls-Royce ayaa isku day kale ku sameysay rikoorka adduunka iyada oo diyaaraddeeda korontada ku shaqeysa.
Duulimaadkan ugu horreeya wuxuu siinayaa shirkadda fursad ay ku ururiso xogta waxqabadka qiimaha leh ee ku saabsan awoodda korontada iyo nidaamka fidinta diyaaradda.
Horumarka ayaa ah nidaam fidin koronto oo dhammaystiran oo loogu talagalay barxaddiisa, ha ahaato kootada tooska ah ee soo degidda iyo soo degidda (eVTOL) ama diyaaradaha rakaabka.
Rolls-Royce ayaa maanta ku dhawaaqday dhammaystirka duulimaadkii ugu horreeyey ee dhammaan korontada Ruuxa Hal -abuurka diyaarad. Markay ahayd 14:56 (BST) diyaaraddu waxay cirka u kaxaysay 400KW (500+hp) korontada korontada oo leh baakad batteriga ugu cufan ee abid la isugu keenay diyaarad. Tani waxay ahayd talaabo kale oo loo qaaday isku daygii rikoorka adduunka ee diyaaraddu iyo guul kale oo ka gaadhay socdaalkii warshadaha duulista ee ku aaddanaa burburinta.
Warren East, Maamulaha guud ee shirkadda Rolls-Royce, ayaa yiri: “Duulimaadkii ugu horreeyay ee Ruuxa Hal -abuurka waa guul weyn oo u soo hoyatay kooxda ACCEL iyo Rolls-Royce. Waxaan diiradda saareynaa soo saaridda horumarka tiknoolajiyadda ee bulshadu u baahan tahay si ay u burburiso gaadiidka hawada, dhulka, iyo badda oo aan qabanno fursadda dhaqaale ee u -guuridda eber saafi ah.
“Tani kaliya maahan jebinta rikoorka adduunka; tiknoolajiyadda baytariga iyo tiknoolajiyadda horumarsan ee loogu talagalay barnaamijkan waxay leedahay codsiyo xiiso leh oo loogu talagalay suuqa Dhaqdhaqaaqa Hawada Magaalada waxayna gacan ka geysan kartaa inay dhab noqoto 'jet zero'.
Xoghayaha Ganacsiga UK Kwasi Kwarteng ayaa yiri: “Guushaan, iyo diiwaanada aan rajaynayno inay raacaan, waxay muujinayaan in UK ay weli ku jirto safka hore ee hal -abuurka hawada sare. Iyaga oo taageeraya mashaariicda sidan oo kale ah, dawladdu waxay gacan ka geysanaysaa sidii hore loogu sii wadi lahaa soohdinta, iyada oo riixaysa teknoolojiyadda xoojin doonta maalgashiga oo furaysa diyaarad cagaaran oo nadiif ah oo loo baahan yahay si loo soo afjaro kaalinteenna isbeddelka cimilada. ”
Inta lagu jiro duullimaadkan koowaad, Rolls-Royce waxay ururin doontaa xogta waxqabadka qiimaha leh ee ku saabsan awoodda korontada iyo hannaanka kicinta. Barnaamijka ACCEL, oo ​​u gaaban “Dardargelinta Korontada Duulimaadka,” waxaa ku jira wada-hawlgalayaasha muhiimka ah YASA, matoorka korontada iyo soo-saaraha xakamaynta, iyo bilowga duulimaadka Electroflight. Kooxda ACCEL waxay sii wadeen hal -abuurnimada iyagoo u hoggaansamaya fogeynta bulshada Dowladda UK iyo tilmaamaha kale ee caafimaadka.
Kala bar maalgelinta mashruuca waxaa bixiya Machadka Teknolojiyada Aerospace (ATI), oo ay iskaashanayaan Waaxda Ganacsiga, Istaraatiijiyadda Tamarta & Warshadaha iyo Innovate UK.
Maamulaha Machadka Teknolojiyadda Aerospace, Gary Elliott, ayaa yiri: “ATI waxay maalgelinaysaa mashaariicda sida ACCEL si UK looga caawiyo inay horumariso kartiyo cusub ayna sugto hoggaanka teknoolojiyadda baabi’in doonta duulimaadyada. Waxaan u hambalyeynaynaa qof kasta oo ka soo shaqeeyay mashruuca ACCEL si uu u noqdo duulimaadkii ugu horreeyay mid dhab ah oo aan sugno isku dayga diiwaangelinta xawaaraha adduunka kaas oo soo jiidan doona mala -awaalka dadweynaha sanadka ay UK martigeliso COP26. Duulimaadkii ugu horreeyay ee Ruuxa Innovation wuxuu muujinayaa sida tikniyoolajiyadda hal -abuurka leh ay u siin karto xallinta qaar ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn adduunka. ”
Shirkaddu waxay u horumarinaysaa macaamiisheeda nidaam fidin koronto oo dhammaystiran oo loogu talagalay madalkeeda, haddii ay taasi tahay korontada oo kacaysa iyo soo degitaanka (eVTOL) ama diyaaradaha rakaabka. Shirkadu waxay adeegsan doontaa farsamada mashruuca ACCEL waxayna ku dabaqi doontaa badeecooyinka suuqyadan cusub. Sifooyinka ay “taksiyada hawada” uga baahan yihiin baytariyada waxay aad ugu eg yihiin waxa loo soo saaray Ruuxa Hal -abuurka, si ay u gaadho xawaare dhan 300+ MPH (480+ KMH) - oo ah bartilmaameedka isku dayga rikoodhka adduunka. Intaa waxaa sii dheer, Rolls-Royce iyo airframer Tecnam waxay hadda la shaqeynayaan Widerøe, oo ah diyaarad goboleed oo ku taal Scandinavia, si ay u gaarsiiso diyaarad rakaab oo koronto ku shaqaysa suuqa rakaabka, kaas oo la qorsheeyay inuu diyaar u noqdo adeegga dakhliga 2026.
Rolls-Royce waxaa ka go'an inay hubiso in alaabteeda cusubi ay la jaanqaadi doonto hawlgalka eber ee sanada 2030 oo dhammaan badeecaduhu waxay la jaan qaadi doonaan eber saafi ah marka la gaaro 2050.